CENTRIFUGAL POMP Haigoni KURA MVURA MVURA
ne admin pane 20-04-13
Kune mweya mune inopinda nepombi (1) vamwe vashandisi havazadze mvura yakakwana pombi isati yatanga; dzimwe nguva mvura inoita kunge yakafashukira ichibva mugomba rekubuditsa, asi isina kutendeudza pombi shaft kumhepo yakaneta zvachose, ichisiya mweya mudiki uchiri mupombi yekupinza kana pombi Iyo (2) wi ...
YAKABORWA PILE KUSIMBISA DUDE SLURRY TREATMENT SCHEME
Iri sei dhaka rinoshanda kunze kwemurwi wakaboora? Iri idambudziko rakaoma rekuboora kuvaka murwi. Chinyakare kuchera uye grouting murwi slurry kurapwa chirongwa chiri: mukutora kwekuchera kushandiswa kwesiseve, matope mune diki giraidhi, jecha uye zvimwe zvikukutu zvakapatsanuka, pil ...
CHINOKONZESA KUTAURA KWENYANZVI CHISIMBISO KUKUNDIKANA KWECENTRIFUGAL POMP
Centrifugal pombi yekudzima inonyanya kukonzerwa nekutadza kwechimakanika chisimbiso. Kukundikana kwekuita kwakawanda kwekudonha, zvikonzero zvekudonha kunotevera: ① static uye ine simba mhete chisimbiso pamusoro pekudonha, zvikonzero zvikuru ndezvekuti: yekupedzisira ndege flatness, hukasha hauna kusangana nereq ...